အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: 2016
ဒေါက်လိုက်ပဲပို့ ပို့ ..
အသက်နဲ့ ခန္ဓာ စတေးထား..
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:22 PM7comments Links to this post
အဖိုးကြီးတစ်ယောက် ရဲ့ သောက
ငါ့ အသက်က ငါးဆယ် ငါး
testosterone ကျား ဟော်မုန်းတွေ ရော့
ဆံပင်တွေ လည်း ပါးပြီ ဆိုတော့
အရက်ပူ အဆီထူ မျက်နှာ
မှန်ထဲ မနက် အိပ်ယာ ထကြည့်
သေရင် ငါ့နောက် ဘာမှမပါလျှင်
ဒီအဖိုးကြီး မသေခင် ဘာလုပ်ရမလည်း။
MId life crisis ဟ်ိုဒီမြောက်ကြွ
ငယ်ပေါင်း မိန်းမတွေ ကျ
ငါ့လင် ရှာတာ ဒီလိုနေနိုင်တယ်ကွ။
ဟင်းခွက်တွေပြ။ ဖုံးတွေ ပွတ်ကြ
ဆင်ခန္ဓာ နဲ့ ဝက်ကိုယ်လုံး
လှမဆုံးတဲ့ မယားကြီးတို့ ရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေ။
၅၀ ကျော်က လူတိုင်းကျတဲ့ အရွယ်
အစာဝလာ.. ပိုမြင့်လာတဲ့ မာန။
ကဲ ကျုပ် ဘာလုပ်ရမလည်း။
ယောက်ျား မာန..ငွေစ ကြွကြွ
ဟွန်း ဖွဲတဆုတ်တောင် မချဖူး
ဒင်းတို့အနားမနေ ဘာဖြစ်လည်း
ကိုယ် ပျော်ဖို့ သာအရေးကြီးတယ်။
ကိုကိုခေါ်သူ ရော့ ပိုများများယူ။
ဒီလိုနဲ့ ဒီလိုနဲ့ ..
ကိုကိုရယ် ဦးရယ် မထပ်
ကွာခြားတဲ့ အသက်က သုံးဆယ်ကျော်။
မယားကြီးလို ပညာအရည်အချင်း မလို
မယားကြီးလို သားဖောက်ပေးဖို့ မလို
အဖုအဖောင်း ဘဲ လိုတယ်။
မသေခင် ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ ကလေးကလား
အဘိုးကြီး ခါချဉ်ကောင်မသန် ဆေးဝါးနဲ့ ဆက်
အခုတော့ ဆေးသောက်များချက် နှလုံးပျက်
လှေကြီးပေါ် လှေငယ်ဆင့်တဲ့ အကြောင်း
အသံတွေ ကြား မလှုပ်နိုင်တဲ့ဘ၀
တိတ်တိတ် မျက်ရည်ကျ ကိုယ်မှားပြီ။
အော် ခုတော့ သ်ိပြီ
မင်းကသာ ငါ့အတွက် မယားကောင်း
အများရဲ့ဂရုဏာ ရ မင်းက နံမည်ကောင်းသူပေါ့
အဖိုးကြီးမိုက် တစ်ယောက်ရဲ့ ရာဂ တဏှာ
လေဖြတ်တော့မှဘဲ ခါးသီးခဲ့တဲ့ ဒီဝေဒနာ။
သူငယ်ချင်း အဖိုးကြီးများအတွက် နောက်ပြောင်တာပါ။ တိုက်ဆိုင်သူတွေ အတွက်ကျ ဘွာတေး..ဘွာတေး..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:29 AM0comments Links to this post
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:36 AM0comments Links to this post
ပုပ်အက်အက် အနံ့ ထွက်
သိုး လာနေတဲ့ ငါးကင်
ပစ်လို့ငါးစ်ိမ်းရှာ။.
သင့် အမှန် ပိုင်ဆိုင်ရာဘ၀
အမှားတွေ ရဲ့ သင်ခန်းစာ
အသစ်များစွာ ရဲ့ ပုရစ်ဖူး
သင့် အတွက် စ်ိမ်းလမ်းမဲ့ သစ်ပင်
သင် ပျိုးသော မျိုးစေ့မှန်
ချိုမြိန်စေမဲ့ ဒီ ရလာဒ်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:01 AM0comments Links to this post
ရွံ ရှာတတ်တဲ့ နှလုံး
လွဲခဲ့သော ကောင်းခြင်းကို ကျေနပ်သူ
အို သူမှာ သူဘဲပေါ့။
ဗိုလ်မှူးမောင်ဘယ်သူပေါ့
အသက် ၃၀ သူ ကျဆုံး
လွဲခဲ့သော ကောင်းခြင်းကို ပျော်ရွှင် ပါတယ်။
ဒါလည်းလေ ကောင်းသော လွဲခြင်းများ။
အစိုးရလခစား ရဲ့ အလုပ်
ကျော်သူ့ ထံ စရံသပ်သူ
ကောင်းသော ဆင်းရဲခြင်း ။
ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ခြေထောက် နှစ်ချောင်း
ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင် တောင့်တင်း၊
ခန္ဓာ လှပ ကျော့ရှင်း
ဤသည် ကားမပိုင်သော လွဲခြင်း။
ငွေကြေး သုံးမကုန် ကိုယ်မပိုင်ပါဖူး
ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစု ကိုယ်ပိုင်တယ်။
အိမ်ကြီးတိုက်တာ ရေကူးကန် ကိုယ်မပိုင်ခဲ့ဖူး
ကိုယ်ခေါင်းပေါ် အမိုးတစ်ခုတော့ ရှိတယ်။
ဆီဦးထောပတ် ကိုယ် မစားနိုင်ဖူး
ပြိုင်လုရမဲ့တခြားမယားငယ်
နိုင်ငံခြားဘွဲ့ လွန် ဘာညာမရခဲ့ပါဖူး။
ပြုစုတတ်တဲ့ ကြင်နာ မှုရှိပါတယ်။
အဆိုးဆုံးတွေ နဲ့ လည်း လွဲနေတဲ့ ဘ၀
ဒီလိုနဲ့ဘဲ ဇာတ်သိမ်းချင်တယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:13 PM0comments Links to this post
အတိတ်ရဲ့ ဆောင်းခဲ့တဲ့ ရွှေထီး
ညည်းညူ တမ်းတ ဂုဏ်ယူမနေကြနဲ့ 
အခု မိုးရွာစဉ် ထီးလုပ်
ထန်းပလပ်စုတ်ကသာ သင့် ပိုင်ဆိုင်ရာ။
လွတ်တဲ့ ငါးတွေ ကြီးမနေနဲ့ 
သင့် အတွက် ဒီညစာ။
ဆူဖြိုးတဲ့ ခြုံထဲ က ကြက်
သင့်မိမယ် မမိမယ် မသေချာ
သင့် လက်ထဲက ကြက်ကိုသာ ချက်စားပါ။
အတ္တ နဲ့ မာန။
ငါ သည် ဆရာ ၊ သူသည် တပည့်
ပုပ်အဲ့အဲ့ လူသေကောင်တွေကို ဆေးဆိုး
လူဆိုတာ လူဘဲ ဖြစ်ပေမဲ့
မသေချာတဲ့ ၊ မရေရာ တဲ့အရာ
မိမိ လက်ထဲကအရာသာ မိမိပိုင်ဆိုင်မြဲ
ရဲရဲ ဘဲ အမှန်တရားသို့ရင်ဆိုင်။
သင့် အနာဂတ်ကို သင်ပိုင်ပြီပေါ့။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:26 PM0comments Links to this post
ချူ လက်ကို မှန်း နေခြည်လန်း၏။
ရန်ကာဆီး လျှက် ဆူး ဖက်ထားသည်။
ထိုက်သင့်သူရာ ချူ ရာတည်း။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:58 AM0comments Links to this post
ဆွတ်ပျံ့ လာတဲ့ လေညှင်း
လှပသော နေ့့သစ်၏ အဆင်း။
ဤ လှပသော နေ့ ရက်၊
မနေ့ ကို ချန်ရစ်ခဲ့
ပစ္စု ပ္ပန်ရဲ့ ရက်တွေ
မနက်ဖြန် နေ့ သစ်အတွက်
ဒီနေ့ ကို အသက်ဆက်ရမယ်။
မနေ့ က စီးရေနဲ့ 
ဒီနေ့ စီးသော ရေမတူဘူး
ရေငွေ့ လို မိုးပျံခ
ဒီနေ့ အတွက် ရဲ့ မင်းခြေလှမ်း
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:50 AM0comments Links to this post
ပိတ်ထားတဲ့ ခြံဝန်း တံတိုင်းကြား
လုံခြုံတဲ့ စည်းရိုးသားတဲ့ အိမ်
ဒါက သူ့ နေတဲ့ ဂေဟာ
ကစားစရာအရုပ် ကိုက်စရာ အမဲရိုး
အ်ိပ်စရာ အိမွေ့ ယာ
အစစ အရာရာလုံခြုံ ဘ၀ကပြည့်စုံပေမဲ့
ခြံအပြင် ကို ကြည့်
ထွက်ပြေး အပျော်ရှာချင် သူ။
ဆူးတွေ နာလည်း မကြောက်
လွတ်လပ်မယ်ဆို ဒါ ပျော်စရာ
ဟိုငေး ဒီငေး၊ ပျော်ရေး လည်လည်
အချိန်တန် တွေ့ တာ အစုံစား
သောက်စရာ ဈေးတန်း ကရေပုပ်
အမှိုက် ပုံတကာဖွ နတ်သုဒ္ဓါတမျှ
ရမယ် လည်သူက စားစတမ်း
အင်အားရှိ မှ အနိုင်ရ
ကိုက်နိုင်မှ အသာရ၊ ဖြတ်နိုင်မှ အစာရ
လုသူမှ အစာဝ။ နု သူများ ဘေးဖယ်ကြ
စားတဲ့ အခါစားရ၊ မစားတဲ့အခါ မစားရ
အိမ်လိုတော့ အစာ အချိန်မမှန်ဖူး။
အိမ်မှာ မစားရသော လူ့ မစင် အနံ့ ထူး
ငါ မြီးဖူးတယ် ငါကြိုက်တယ်။
လှလှ မလှလှ အတွေ့ နဲ့ကာမ
လမ်းခွေးများစွာ နဲ့မာန်ဖီ
နားရွက်လည်း ပြတ်၊ မျက်လုံး လပ်
မျက်နှာတွေ ပဲ့၊ သွားတွေ နဲ့ 
နံရိုးတွေ ယဲ့ယဲ့ ခြေလက် ဒဏ်ရာ နဲ့ 
အရေပြား ၀ဲစား၊ ပေါ လိုက်ပါတဲ့ သန်းများ
တနေ့ မှာ အစာမရှိ
ပိုင်ရှင်ဟောင်း နဲ့ပြန်ဆုံတယ်။
မကျန်းမာတာ ဆေးကု၊ အမေပြုစုပါ့မယ်။
ဒီလိုနဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့တဲ့ အိမ်
အစာရေစာ မပူရ မူလ ဘ၀ပေါ့။
အတွင်းမှာ နေရေး မလွယ်
အမေရယ် ကျနော့ကို လိုက်မရှာနဲ့ ။
လမ်းဘေး ကားတိုက်ခံရတဲ့ ခွေး
ကြေမွ အတိ၊ ဘယ်သူမှ ပြေးမကြည့်။
အမေ ကတော့ သိတယ်။
အော် လမ်းဘေးမှာ အပျော်ရှာ
အမေ့အိမ် မပျော်သော ခွေးမိုက်
ဗီဇ နဲ့ဝါသနာ တိရိစ္ဆာန်တောင် မနေသာဖူး
အိမ်မွေးခွေး နဲ့ အိမ်ပြေးခွေး နှစ်ဘ၀
ချစ်သော အောင်နက် ၏ ရာဇ၀င်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:34 PM0comments Links to this post
မဲမဲ မြင်ရာ သပိတ်မမှောက်ကြ နဲ့ 
ကျေးဇူး ရှိမှသာ ကျေးစွပ်
ဒီ စကား မှ တကယ်မှန်ပြီ။
မပြီးခင် ဗမာ မမြင်စေနဲ့ 
သပိတ် တလုံး၊ မင်းနံမည် မရှုံးစေနဲ့ 
အခုမှ ထောင်က ထွက်
တိုက်မအောင်တဲ့ တော်လှန်ရေး အဆက်ဆက်
၈၈၈၈ က စ မနေ့ အထိ ရက်ဆက်
အသက်တွေ သေ၊ ကုန်လိုက်တဲ့ လေ။
တွေ မြင်နေရာတိုင်း၊ ပါးစပ်ဆိုင် လေသေနတ်ပစ်
လက်ရုံးရည်နဲ့ မဖြစ်နိုင်၊ နှလုံးရည်နဲ့ ပြိုင်ကြအံ့။
သယံဇာတကာ၊ ဆို့ ပိတ်ခံရတော့မဲ့ မြစ်ကျော
အကြွေးတင် အပေါင်ဆုံးတော့ မဲ့
ရွှေ့ ပြည်ကို ကယ်တင်စရာ
သူမ တစ်ယောက်ဘဲ အားထားရာ။
နိုင်ဖို့ နည်းပေါင်းစုံ က သူမ ဘဲ သိတာ။
မတန်မရာ၊ မတိုင်းသင့်တဲ့ မင်း ခြေရာ
ငါသိပ်တော်ပြီ ခေါင်းမထောင်နဲ့ 
ငါသိပ်စွမ်းသည် တက်မထောင်နဲ့ 
သခင်ပေါက်စ ထောင်ခြောက်လ စာရင်းထဲ
ဘယ်မလဲ။ အောင်ဆန်း၏ ဒီ နံမည်
သူများ ကို ကယ်ချင်
ကိုယ် အန္တရာယ် မကျ ရကြေး
ညံ့ပါ လို့ သာ၊ အဖမ်း ခံရ..
လွတ်သူ က ပို မတော်ပေဖူးလား ဟရို့ 
မင်းစဉ်းစားပါ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတို့ 
ကဲ အောင်ဆန်း၏ သွေး
အခု ဒို့ အရပ်သား အစိုးရ ရာဇ၀င်ရေး
ကလေးတွေ ငါးမူးတန်းက အော်မနေနဲ့ .
ဒါ လူကြီးတွေ၊ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အချိန်။
စစ်တုရင်ခုံပေါ် အကွက်ဆင် ချောင်းနေခိုက်
နောက်လူ တွေ ပညာတွေ ယူလိုက်ကြပါ့
နောင် နှစ်များစွာ မြေအုတ်တွေ ကြွေ
ကျောက်အုတ်တို့ နဲ့တည်မဲ့ မြို့ တော်
မသဒ္ဓါ ( ၄။၈။ ၂၀၁၆)
သားတို့ ရယ် လိမ်မာကြပါ။ ခဏ လေးညိမ်ပြီး ပွဲကြည့်ကြပါဦး။ ဆရာကြီးတွေ ချတဲ့ အကွက်ကလေးတွေ ဘယ်လောက် လှတာ အရင် လေ့လာကြပါဦး။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:39 PM0comments Links to this post
အာရုဏ်ဦးသို့ကြိုဆိုခြင်း
ဒီနေ့အမေ သိပ်ပျော်ပါတယ်
ငါးတွေ လွှတ်တဲ့ အခါ
ခိုတွေ လွှတ်တဲ့အခါ
အမေတို့အားလုံး သိကြပါတယ်။
လှောင် ချိုင့်ထဲက ကျဉ်းကျ ဝေဒနာ
အမေ ကိုယ်တိုင် ခံစားဖူးတဲ့အရာ။
အမေ ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ ဖူး တဲ့အရာ။
ချစ်ခင်သူများနဲ့ခွဲခွါရတဲ့ ၀ဋ်ကံနာ
အမေ ရင်းနှီးခဲ့ ဖူးလို့ ပါ။
အာဇာနည်များရဲ့ စွန့် လွှတ်ခြင်း ပါရမီ
အမေ ရင်နဲ့ အမျှ နားလည် ခဲ့ပါသည်။
အမေရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရင်းနှီးခဲ့သော အိမ်မက်
မနက်မိုးသောက် ရောင်နီနဲ့ အတူ
မြန်မာ နိုင်ငံသို့အလင်းတန်းလက်
တရားဝင် ပြည်သူပေးတဲ့ အာဏာစက်
အမေ လက်နဲ့ သုံးနိုင်ခဲ့ပြီ။
လှောင်ချိုင့် တံခါးကို ဟင်းလင်း
သားသမီးတို့ ရယ် ၀မ်းမြောက်ကြပါ။
ဒီကနေ့ က စ
ပြာပုံထဲက အားလုံး နိုးထ
ဒို့ တတွေ အလုပ် လုပ်ကြရတော့မည်။
အားသစ်နဲ့ ချီ. မိုးဆီပျံမဲ့ ဇာမဏီ ဒေါင်းဌက်
တယောက်တလက် ရဲ့အားအင်သစ်
မြန်မာ နိုင်ငံအသစ် ကို တည်ကြရအောင်။
မသဒ္ဓါ ( ၄။၇။ ၂၀၁၆)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:46 PM0comments Links to this post
အဖေ တစ်ဦးရဲ့ မျှော်လင့်ချက်
ဘယ်လို လူတွေ ဆူဆူ
အဖေ နံရံ အပြင်ကစောင့်နေတယ်။
မြင်ချင်တဲ့ သမီးလေး ရဲ့ မျက်နှာ။
နှောင်ကြိုးမဲ့ဒေါင်း ဝေဟင်ပျံ မဲ့ ရက်မင်္ဂလာ။
မိန်းကလေးပေမဲ့မျက်ရည်ခိုင်တဲ့သူ
ငယ်ရွယ်ပေမဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ နှလုံးစိုင် နဲ့ သူ
ဒီသမီးဟာ အဖေအတွက် ကျ
ဒီသမီးဟာ မြန်မာပြည် အတွက် ကျ
အနာဂတ်ကို ထူထောင်ကြမဲ့ အုတ်တချပ်
ဒေါင်းအလံနီ စွင့်လို့ 
ဘယ်အချိန် ဘယ်အခါ ပါလည်း
နေကြဲကြဲ အရိပ်မဲ့ ထောင်တံခါးဝထိပ်
သမီးလေးကို လွှတ်မယ် ပြောသောနေ့ 
သူငယ်ချင်း ကိုနေ၀င်းနဲ့သမီးငယ် ဖြိုးဖြိုးအောင်အတွက်..အပျော်မျက်နှာလေးတွေ ထာဝရ ရှင်သန်ပါ စေကြောင်း မသဒ္ဓါ မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
အာဇာနည်မျိုးသေမျိူးမရှိပါ သမီး
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:04 PM0comments Links to this post
တရားသူသာ အောင်မဲ့ ပွဲ
မီးရောင်မှိန် ပတ်မ တုတ်
ညိမ်ကြဟေ့ ပွဲစ မယ်။
သတင်းစာတွေ အမှန်တွေ ဖွင့်ကုန်။
ဒီည က မဲ့ ဇာတ် က
ရာမ ရဲ့ လေးတင်ပွဲ
၀င်ခွင့် လက်မှတ် မပါ
ပြိုင်ပွဲ ခိုးဝင်တဲ့ ဒဿ ဂီရိ
လေးညှို့ သာ တင်တတ်ပါ၏။
ရိုးသားစွာ အနိုင်ရ တဲ့ ရာမ
ပန်းကုံး နဲ့ ကြင်ယာ ရ
ဘီလူး အစွယ် စ ပြတယ်
ကောက်ကျစ် ပြိုင် လို့ 
မယား ခိုးကြ တဲ့ပွဲ၊
ရွှေသမင် မနှယ် သူ ညှို့ ဆွယ်
စည်းဝိုင်း အပြင် ထွက်ခိုက်
ခိုး သွား လိုက်ပါတဲ့ ဘီလူး
ရာဝဏပြည် သိန်းခို လင်္ကာရ
ရာဇ၀င် ၏ သက်သေ။
အယောင်ဆောင် ဘီလူး ကို မယုံလေနှင့်။
ကယ်ဆယ်သူက မောင်တော် ရာမ
ဟန်နုမာန် မျောက်မြီးက မီးစ
သိန်းခို ပြည် ပြာကျတယ်။
တရားသူ သာ အနိုင်ဆုံး
ရာမနဲ့ မယ်သီတာ ရဲ့ နှစ်ပါးခွင်
ဒို့ တတွေ ကြည့်ချင် လှ ပါပေါ့
ကဲလေ… ပွဲ စတော့။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:45 PM0comments Links to this post